အက်သလက်တီကို vs မန်ယူနိုက်တက်? ယခုတစ်ပတ် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းပေးသွားခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင် - xyznews.co
အက်သလက်တီကို vs မန်ယူနိုက်တက်? ယခုတစ်ပတ် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းပေးသွားခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကတော့ အင်္ဂလန် ကလပ်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မန်စီးတီး နဲ့ လီဗာပူး တို့ဟာ စပို့တင်းလစ္စဘွန်း နဲ့ အင်တာမီလန် တို့ကို အဝေးကွင်းမှာ နိုင်ပွဲတွေ အသီးသီး ရယူကာ ကွာတားဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်နိုင်ရန် နီးစပ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မန်ယူနိုက်တက်ဟာ အက်သလက်တီကို အဝေးကွင်းမှာ သွားရောက် ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ချဲလ်ဆီးကတော့ လိုင်လီကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံ ကစားသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁~ချဲလ်ဆီး vs လိုင်လီ
ဒီတစ်ပတ် ချန်ပီယံလိဂ် မှာတော့ ဥရောပရဲ့ လက်ရှိ ချန်ပီယံ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လီဂူးဝမ်းချန်ပီယံ လိုင်လီ တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်လီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အရမ်းကောင်းတဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒီရာသီမှာတော့ ရုန်းကန်နေရပါတယ်။
သူတို့ဟာ ပြည်တွင်း အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့် ၁၁ နေရာမှာ ရှိနေပြီး ဒီပွဲစဉ်ဟာ သူတို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုပါ။ လိုင်လီဟာ အုပ်စုကနေ တက်လာအောင် အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီအဆင့် ကတော့ သူတို့ နောက်ဆုံး ရောက်နိုင်မယ့် အဆင့်လို့ ကျွန်တော် မြင်မိပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : ချဲလ်ဆီး ၂-၀ လိုင်လီ
၂~ဗီလာရီးရဲယ် vs ဂျူဗင်တပ်
ဒီပွဲဟာ ခန့်မှန်းရ ခက်ခဲပါတယ်။ ဗီလာရီးရဲယ်ဟာ အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့ အပြင် ဥရောပမှာ အကောင်းဆုံး လုပ်ပြနိုင်လေ့ ရှိတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ယူရိုပါလိဂ်ဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တာကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဒီရာသီ အထနှေးခဲ့ပေမယ့်လည်း လက်ရှိမှာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး လာလီဂါရဲ့ အဆင့် ၆ နေရာကို တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ နည်းပြ အူနိုင်းအမ်မရီဟာ ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေမှာ တကယ့်ကို အစွမ်းထက်တဲ့သူပါ။
ဂျူဗင်ကတော့ စိတ်ပျက်စရာ ရာသီ ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ဟာ စီးရီးအေမှာ top4ဝင်အောင် လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ ယခုနှစ်စကနေ စတင်ကာ တိုးတက်မှုတွေကို ပြသနေပါတယ်။
ကစားသမားသစ် ဗလာဟိုဗစ်ဟာ မြင့်မားတဲ့ ဈေးနဲ့ ရောက်လာခဲ့တာကြောင့် သွင်းဂိုးတွေ ရယူပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အသင်း နိုင်သွားမလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် မခွဲနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သရေပွဲပါပဲ။
ခန့်မှန်းချက် : ဗီလာရီးရဲယ် ၁-၁ ဂျူဗင်တပ်
၃~အက်သလက်တီကို vs မန်ယူနိုက်တက်
ဒါဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ပွဲစဉ်ပါ။ အက်သလက်တီကို ကတော့ ထူးဆန်းတဲ့ ရာသီ ဖြစ်နေပြီး ပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်အောက် ရောက်နေပါတယ်။ ခံစစ်ပိုင်းမှာ ပြသနာတွေ ရှိနေပြီး ဆီမွန်နီရဲ့ အသင်းမှာ ဒါမျိုး ဖြစ်တာကို မကြားဖူးခဲ့ပါဘူး။
ဒီလို ပွဲကြီးတွေ..အထူးသဖြင့် အိမ်ကွင်းမှာ သူတို့ကို ကျွန်တော် လျော့မတွက်ပါဘူး။ ဆီမွန်နီ အနေနဲ့ သူ့အသင်းကို ဒီပွဲအတွက် အသင့်ဖြစ်နေအောင် လုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့က လိဒ်ကို နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ခံစစ်မှာ ပြသနာတွေ ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဒီလို ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့ ပွဲတွေမှာ ယူနိုက်တက်ဟာ ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းမှာ လုံလောက်မှု ရှိနေသလား? ကျွန်တော် သံသယ ဖြစ်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အက်သလက်တီကိုက အနည်းငယ် သာနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လူးဝစ်ဆွာရက် ဂိုးသွင်းသွားမယ် ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် အံ့သြမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနှစ်သင်းကြား ကွာခြားချက် သိပ်မရှိပေမယ့် အိမ်ရှင်တို့ ကပ်ပြီး အသာရသွားမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : အက်သလက်တီကို ၂-၁ မန်ယူနိုက်တက်
၄~ဘင်ဖီကာ vs အိုင်ယက်
သူတို့ရဲ့ ပုံမှန် standard အရ ဘင်ဖီကာဟာ ဒီရာသီ ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲမှာ စွမ်းဆောင်ရည် မကောင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ပေါ်တိုနဲ့ ၁၂ မှတ် ထိ ကွာဟနေမှုဟာ လက်မခံနိုင်စရာ ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ form က ဒီထက် တိုးတက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ အိုင်ယက်ဟာ အရမ်းကောင်းတဲ့ ရာသီကို ဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းလိဂ်မှာ သူတို့ရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေဟာ တကယ့်ကို အံ့ဖွယ်ဖြစ်ပြီး ဂိုး ၇၀ သွင်းယူကာ ၅ ဂိုးသာ ပေးထားခဲ့ရပါတယ်။
အိုင်ယက်ဟာ အုပ်စုအဆင့်ကို လွယ်ကူစွာနဲ့ ကျော်ဖြတ်လာခဲ့တဲ့ အသင်း ဖြစ်ပြီး ပွဲတိုင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီရာသီ အစောပိုင်းမှာ စပို့တင်းကို လစ္စဘွန်းမှာ ၅-၁ နဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ အသင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လစ္စဘွန်းမှာ အိုင်ယက်ရဲ့ နောက်ထပ် နိုင်ပွဲကို မြင်တွေ့ရမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : ဘင်ဖီကာ ၁-၂ အိုင်ယက်
Previous Article လီဗာပူးဟာ သူလုံး၀ ထင်မှတ်မထားခဲ့တဲ့ အရာကို လုပ်ပြသွားခဲ့တယ်လို့ ၀န်ခံလိုက်တဲ့ ဂယ်ရီနဗီး
Next Article အသင်းဟောင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရမယ့် ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတဲ့ ဒါးဗစ် ဒဟဲယား